I-ANC inxusa ukuthula kulandela ukubulawa kwabantu e-KZN | News24
I-ANC inxusa ukuthula kulandela ukubulawa kwabantu e-KZN
Durban - UKhongolose omaphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal unxusa ukuthula embonini yamatekisi kulandela ukubulawa kwesikhulu samatekisi kanjalo nabanye abantu abangu-9 ngoLwesibili.
I-ANC isho kanje kulandela ukujutshwa kweProvincial Taxi Task Team ukuba iphenye ngalesi sigameko sokudutshulwa kubulawe abantu ngaphandle kwaseLadysmith.
Kukholakala ukuthi ukungaboni ngasolinye phakathi kosomatekisi yikho okuholele kulesi sibhicongo.
OLUNYE UDABA:Kushone 10 wabantu esigamekweni esihlobene 'nodlame lwabamatekisi' eKZN
Amaphoyisa ahlonze lo somatekisi obulewe njengeSekela likaSihlalo wenhlangano yamatekisi aseKlipriver.
"Njenge-ANC kulesi sifunda, sizwile ukuthi kunezinxushunxushu embonini yamatekisi. Nakuba singeke siziqonde izingqinamba ezibhekene nale mboni, kodwa njengabaholi bomphakathi sinomsebenzi wokunxusa ukuthi kube nokuthula," kusho uSipho Hlomuka onguNobhala jikele we-ANC oKhahlamba.
Okhulumela amaphoyisa, uColonel Thembeka Mbhele, uthe lesi sikhulu samatekisi besihamba ngeveni kuMatiwaneskop Road nabanye abantu abane ngesikhathi sihlaselwa ngabantu abebehamba ngezimoto ezimbili, bavulela ngenganono bebhekise ngakubo kwashona bonke abebesevenini.
"Izisulu zibe sezihluleka ukulawula imoto yayoshayisa itekisi okukholakala ukuthi ibithwele othisha, kwashona abahlanu kubo kwathi abanye balimala kanzima.
"Kuvulwe amadokodo amahlanu okubulala namahlanu okubulala ngokungenhloso esiteshini samaphoyisa ase-Elangslaagte ukuze kuzophenywa."
Uthe okwamanje imbangela yesigameko kuyaphenywa ngayo.